जीवनशैली :: Sambodhan News
भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन जति आर्कषक छन्, शारीरिक रुपमा पनि उत्तिकै फिट देखिन्छन् । उमेरको हिसाबले उनी ४२ बर्षका भए । तर, उनलाई अझैपनि उत्तिकै जवान र उर्जावान् देखिन्छन् । आखिर, हृतिक त्यस्तो के गर्छन्, जसले उनलाई यति धेरै फिट रहन मद्दत गर्छ ?
पुरा पढनुहोस् ...
के बिहान खाजा खानु वास्तवमै फाइदाजक छ ?
अहिले हामी स्वस्थ्य जीवनशैलीको खोजीमा छौं । यसमा खानपानको अहंम हिस्सा छ । भनिन्छ, खाना स्वस्थ्यवर्द्धक एवं पोषिलो हुनुपर्छ । तर, त्यती मात्र काफी छैन । खाने तालिका र तरिकाले पनि यसको लागि खास भूमिका खेल्छ । खाना खाने निश्चित तालिका छ । त्यसैगरी खाना खाने खास तरिका पनि छ । यदि तालिका र तरिका मिलाएर खाइयो भने उक्त खाना शरीरमा राम्ररी पच्छ । शरीरले त्यसबाट पोषक तत्व ग्रहण गर्छ ।
लुगा त थरीथरीको लगाइन्छ, तर आफैलाई सुहाएको जस्तो लाग्दैन । ज्यान भद्दा भएर हो वा लुगा नमिलेर ? भेउ पाउन सकिदैन । आफैलाई आफ्नो पहिरन असुहाउँदो लागेपछि हिनताबोध हुन्छ । आत्माविश्वास हराउँछ । ‘अरुले केही भन्लान् कि ?’ यस्तो आशंकाले मनमा ग्लानी पैदा हुन्छ । भनौं, असुहाउँदो पहिरनले मानसिक तनाव दिन्छ ।